"ချီးမွမ်းခြင်းကိုလေ့လာခြင်း၏ဝေဖန်မှု" - Rory C. Reid၊ Ph.D ဘွဲ့ကိုရရှိထားသူ၊ LCSW (ဇူလိုင် ၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Rrair C. Reid၊ Ph.D. , LCSW မှ“ ချီးကျူးခြင်းလေ့လာခြင်း၏ဝေဖန်မှု”
မှတ်ချက်များ YBOP: ဂယ်ရီ Wilson ကသူ၏စိတ်ပညာယနေ့ဝေဖန်မှုကိုထုတ်ဝေပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အောက်ပါ“ ဝေဖန်မှု” ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် သံမဏိ et al ။ , ၂၀၁၃ ခုနှစ် (Prause လေ့လာမှုဟုလည်းခေါ်သည်) -“SPAN Lab မှ Porn လေ့လာမှုအသစ် (၂၀၁၃) တွင်မည်သည့်အရာကမျှအဘယ်အရာနှင့်မဆက်စပ်ပါ။ ”။ စာဖတ်သူမည်သူမဆိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်း Rory Reid ၏ဤဝေဖန်မှုသည်ဝေဖန်မှုမဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစားသူက Nicole Prause EEG လေ့လာမှုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုပ်ဆောင်တယ် (သံမဏိ et al။ , 2013) နှင့် Prause ကိုယ်တိုင်ရေးသားခြင်းဖြစ်နိုင်သည် (ဤဆောင်းပါး၏အချိန်တွင် Rory Reid ကသူ၏ရုံးခန်းသည် Prause ၏ဘေးတွင်ရှိသည်ဟုဖော်ပြထားသည် - သိသောသူများက Reid သည် Prause အားသူမ၏ UCLA အလုပ်ရရှိရန်ကူညီသည်ဟုဆိုကြသည်) ။
အဘယ်ကြောင့် Prause လေ့လာမှုကိုတရားဝင်ဝေဖန်မှုက Gary Wilson ကို ၁၀ ကြိမ်ဖော်ပြခဲ့သနည်း။ ဒါမဟုတ်ဘူး။ နောက်ထပ်ပေးလှူသည် Rory Reid ကြောင်း3ကြိမ်ဖော်ပြထားသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း post ကိုဂယ်ရီ Wilson က၏စိတ်ပညာယနေ့ Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှု မရှိတော့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးရိဒ်နှင့် Prause ပျောက်ဆုံးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောင်းစွာသိပါစေ။ Nicole Prause က Psychology Today ကို Wilson ရဲ့ရာထူးကိုဖယ်ရှားဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ် ဒီ post နှစ်ခုကတခြားဘလော့ဂါများအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ Reid ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ Wilson ၏ဝေဖန်မှုတွင်အမှားမရှိပါ။
Rory Reid ၏ဝေဖန်မှုအပေါ်ဂယ်ရီ Wilson ၏တုံ့ပြန်မှု ဒီမှာ (ဤနေရာတွင်အသေးစိတ်အနည်းငယ် များစွာသော shenanigans Prause သည် Wilson ၏ဝေဖန်မှုကိုချေမှုန်းရန်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခဲ့သည်) ။ ကွားနှစ်များတွင် Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုကိုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုရှစ်ခု ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်: အားလုံးနှင့်အတူသဘောတူသည် Wilson ကရဲ့ 2013 ခုနှစ်ဝေဖန်မှု - ကြောင်း Prause ရဲ့ အမှန်တကယ် တွေ့ရှိချက်များသည်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံသည်။ ထို့အပြင် UCLA သည် Prause ၏စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုမပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည် (၂၀၁၅၊ ဇန်နဝါရီလခန့်) ။
ချီးမွမ်းခြင်း၏ဝေဖန်မှု (PDF ဖိုင်ရယူရန်)
Rory C. Reid, Ph.D ဘွဲ့ကို, LCSW အားဖြင့်
လက်ထောက်ပါမောက္ခသုတေသနစိတ်ပညာရှင်, UCLA ရဲ့ Resnick အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါဆေးရုံ, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်၊ Los Angeles ။
ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause နှင့်အမည်ရသူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကကောက်ယူလတ်တလောလေ့လာမှုမီဒီယာအာရုံစိုက်မှုတွေအများကြီး "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုမှဆက်စပ်သည်" ရှိထုတ်ဝေထားပြီး လူမှုဗေဒအာရုံကြောသိပ္ပံဂျာနယ်နှင့် စိတ်ပညာ။ ကျွန်ုပ်၏စာတိုက်ပုံးသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ လူနာများနှင့်မီဒီယာများမှဤလေ့လာမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းများပြည့်လျှံနေသည်။ မျှတတဲ့အမြင်ပေးဖို့ Time မဂ္ဂဇင်းလိုမီဒီယာတောင်းဆိုချက်တွေကိုငါတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ ပထမ ဦး စွာငါဒေါက်တာ Prause ယုံကြည်စိတ်ချရသောသုတေသီသည်နှင့်သူမ၏ရုံး UCLA မှာဒီမှာသတ္တုတွင်း၏အနီးတွင်တည်ရှိသည်ကြောင်းပြောပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သဘောတူသည့်အရာများရှိပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပုံမှန်လေးလေးစားစားဆက်ဆံသည့်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိခဲ့သည်။ ဤစာတမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကန ဦး တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမှာ hypersexual အပြုအမူ၏ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွင်ဘားကိုမြှင့်တင်ပေးခဲ့ခြင်းအတွက်သူမအားကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအနေဖြင့် hypersexuality အတွက်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုကျွန်တော်မထောက်ခံကြောင်းသိသော်လည်း၎င်းသည်လက်ရှိအချိန်တွင်၎င်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများမရှိဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သောသိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံသည်။ ငါပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့တခြားနေရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဤအနေအထားကိုထုတ်ဝေခဲ့ကြသည် (Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013) ။ ငါသည်လည်း hypersexual အပြုအမူအတွက်အကူအညီရှာသောလူနာများနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ ထိုလူအများတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကို“ စွဲလမ်းမှု” ရှိသည်ဟုယူမှတ်ကြပြီးသိပ္ပံနည်းကျ nomenclature ကို အခြေခံ၍ ကုထုံးဆိုင်ရာသူတို့၏ယုံကြည်ချက်များကိုလျှော့မတွက်ပါ။ Dr.Prause နှင့်ကျွန်ုပ်သည်နှစ် ဦး စလုံးသည်သိပ္ပံပညာရှင်လေ့ကျင့်သူပုံစံတွင်လေ့ကျင့်ခံခဲ့ရသော်လည်းသူသည်သိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမသည်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသော်လည်း၊ အတိတ်တွင်ပါရဂူပါရဂူဘွဲ့ကိုသင်ကြားရန်လူနာများကိုမတွေ့ရသေးပေ။ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်ဤပြissueနာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်လေ့လာပြီးသိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ လိင်ဆိုင်ရာမမှန်မကန်ပြုမူသောအပြုအမူများကိုလေ့လာသည်။ Dr. Prause သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်ရန်အားထုတ်နေသူများကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ တကယ်တော့သူမကသူမရဲ့မီဒီယာအသွင်အပြင်အားလုံးမှာဒါကိုအတိအကျအသိအမှတ်ပြုနေပုံရတယ်။ သို့သော်သူမထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူပုံစံများကိုသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲ "ရောဂါ" သို့မဟုတ် "စွဲ" အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာသင့်ကြောင်းဘုံအနေအထားကနေကွဲပြားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သူမရဲ့မကြာသေးမီကလေ့လာမှုကလိင်ခွဲခြားမှုမရှိသောအပြုအမူ၏ဤဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြရန်စွဲလမ်းပုံစံသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုသီအိုရီတစ်ခု၏တရားဝင်မှုကိုစိန်ခေါ်နေသည်။ သူမ၏လေ့လာမှုကိုတိုးချဲ့ခြင်းသည်ဆွေးနွေးငြင်းခုံရန်ပိုမိုကြီးမားသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုပေါ်ပေါက်စေနိုင်သည်။ တစ်ခုကဘာလဲ စှဲမွဲမှု? ဤသည်ယင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်မှာသူမ၏ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုစသည်တို့လိင်စွဲလမ်းများအတွက်အကူအညီ hypersexuality, ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီ ... တရားဝင်ပြဿနာကြုံနေရရှိမရှိ၏ပြဿနာဖြေရှင်းပါဘူးပေးထားအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးစွဲသီအိုရီဤပြဿနာအတွက်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ကူညီအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းချက်ရှိပါတယ်ရှိမရှိကိုအကောင်းဆုံးရှင်းပြချက်ရှိမရှိမေးတယ်။ ဒါပဲ! တစ်နေရာရာမှာရောနှောတက်ထဲမှာမီဒီယာကဒီယူနှင့်ကပိုပြီးတိကျစွာအကောင်းဆုံးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့သီအိုရီအဖြစ်စွဲစိန်ခေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြလိမ့်မယ်လာသောအခါဒေါက်တာ Prause ရဲ့လေ့လာမှုအကြံပြုဖို့ကပုံပျက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏တည်ရှိမှု discounts ထားပါတယ် လိင် dysregulated အပြုအမူတွေ့ကြုံခံစားတဲ့သူ။
လုပ်ခံရဖို့နဲ့အခြားသက်ဆိုင်ရာအချက်များ, သင်တန်းရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအဆိုမျိုးကို (ဥပမာ P3, fMRI လေ့လာမှုများ, စသည်တို့အတွက် BOLD activation ... ) တစ်ဦးနှောက်အမှတ်အသားတစ်ခုသို့မဟုတ်ရောဂါ၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်းအဘို့သက်သေအထောက်အထားကိုစဉ်းစားရပါမည်နိုင်မလား။ ဖြစ်ပါသည် ဤသည်ကိုမကြာခဏသတိမမူ, သေးသောကြောင့်ကျနော်တို့ဒါထွက် EEG, fMRI, DTI နှင့်များ၏အစီအမံအသုံးချဖို့သိပ္ပံပညာ၏ရလဒ်များကိုရှင်းပြနှင့်အနက်ကိုဘော်ပြရအံ့နညျး၏စိတ်နှလုံးမှာဖွင့်ကြောင်းအများအပြားပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောယူဆချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလည်းနှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်း, သို့သော်စိတ်ကိုထားပါ။ ကျနော်တို့ကပုံရိပ်လေ့လာမှုများ hypersexuality သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနေတဲ့တရားဝင်ရောဂါကြောင်း "သက်သေပြ" အကြံပြုခြင်းသတိထားပါရန်ရှိသည်။
တချို့ကဝေဖန်မှုနှင့်မှတ်ချက်အများကဲ့သို့က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အင်တာနက်ပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာပါပြီ စိတ်ပညာ ယနေ့တွင် (ဥပမာ - Mr. Gary Wilson; Dr. Brian Mustanski) ။ ဝေဖန်မှုအချို့ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှင့်အချို့သောပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသဘောမတူနိုင်ပါ။ ဒီအရာတွေထဲကအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပြီးနောက်မှာ Prause ရဲ့လေ့လာမှုကိုတုန့်ပြန်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အချက်တွေကိုဆက်ပြောပါမယ်။ [မှတ်ချက် - မစ္စတာဝီလ်ဆင်၏တင်ပို့မှုအပေါ် စိတ်ပညာယနေ့တွင် နောက်ပိုင်း] ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး
မစ္စတာ Wilson က Dr.Prause သည်သူမ၏လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသော SDI subscale အားလုံလောက်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟုပြောဆိုရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ မစ္စတာ Wilson ကသူမ၏ဆောင်းပါး၌သတင်းအချက်အလက်လွဲချော်ခဲ့သည်။ စာရွက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Solitary SDI subscore ကို Dyadic Scale နှင့်အတူတွက်ချက်ခြင်း၊ စာတမ်းက“ နှစ် ဦး စလုံးသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်…” နှင့်“ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုမရောက်ရှိနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ p <0.05” ဟုဖော်ပြထားသည်။ တိုက်ပိတ်စကေးသည် P3 နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ Dyadic subscale သည်စာပေများတွင် ပို၍ အသုံးများပြီးဘက်လိုက်မှုများကိုသတင်းပေးပို့ခြင်းနည်းပါးသည်။ (“ အိမ်သို့ပြန်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုမပြုလုပ်နိုင်”) သည်“ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလူတစ်ယောက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မစောင့်နိုင်ပါ” ကဲ့သို့လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိပါ "။ ) ဒေတာအပြည့်အဝကျယ်ပြန့်အသုံးပြု, ကောင်းစွာ - သွင်ပြင်လက္ခဏာစကေးကနေကိုယ်စားပြုခဲ့ကြသည်။ အကယ်၍ မည်သူမဆိုထိုအချက်အလက်များကိုတောင်းခံပါက Dr. Prause နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သူတို့၏သိသာထင်ရှားသောရှာဖွေခြင်းတန်ဖိုးများကိုမျှဝေမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သေချာသည်။ သို့သော်သိပ္ပံနည်းကျစာတမ်းများမှသိသာထင်ရှားသောတန်ဖိုးများကိုမကြာခဏချန်လှပ်ထားသည်။ သူတို့သည် hypersexual ပြproblemsနာသုံးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်းသူတို့၏စာတမ်းတွင်“ P300 ကှဲလှဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအတိုင်းအတာကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ရန်ဤလေ့လာမှုတွင်အကြေးခွံများစွာကိုဆန်းစစ်လေ့လာသော်လည်း ပို၍ များသောအကြေးများ (ဥပမာ Reid, Garos, & မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှု၏အဆိုပြုထားသည့်အဓိကအင်္ဂါရပ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထည့်သွင်းနိုင်သည့် Carpenter, 2011) ။ ” ဥပမာအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှမခံစားမိပါက“ လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားပြproblemsနာများ” အတွက်စုဆောင်းခြင်းခံရသောပါဝင်သူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမသမာမှုစကေး (SCS) ကိုထောက်ခံခြင်းခံရနိုင်သည်။ SCS တွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများရှိသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများသည် SCS တွင်ရမှတ်များလျှော့ချခြင်းကိုထောက်ခံအတည်ပြုခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်၏သုတေသနအဖွဲ့သည်ဤအကန့်အသတ်ကိုကျော်လွှားရန် Hypersexual Behaviour Inventory (Reid, Garos, & Carpenter, 2011) တီထွင်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာဒေါက်တာ Prause ကသူမ၏စုဆောင်းမှုနည်းလမ်းသည်နှိုင်းယှဉ်ချက်အနေဖြင့် Winters, Christoff, & Gorzalka, 2010 အားနှိုင်းယှဉ်။ ဖော်ပြသည်မှာ“ hypersexual ပြproblemsနာများရှိသော 'လူနာ' 'ဟုတံဆိပ်ကပ်ထားသောရမှတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်ရမှတ်များနှင့်ပါ ၀ င်သူများအားအောင်မြင်စွာစုဆောင်းခဲ့ပုံရသည် "ဟုဆိုသည် သို့သော်အခြားအဖြစ်အပျက်များတွင်လည်းဆောင်းရာသီ၏ hypersexual လူနာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်လက်တွေ့လက်တွေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည့်အရာနှင့်မလုံလောက်ကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ DSM-5 ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုမှ (လူနာများအား hypersexual 'အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်အဆိုပြုထားသော hypersexual disorder စံနှုန်းများကို အခြေခံ၍ အဖြေရှာတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှထုတ်ဝေသည့်တစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုတစ်ခု) မှအချက်အလက်များကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ SCS အချက်အလက်အတွက်ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ။ ဤရွေ့ကားနံပါတ်များကို DSM-5 လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှု (Reid, et al, 2012) ပေါ်တွင်ငါတို့ထုတ်ဝေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ကြပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက်လူနာတွေအတွက် SCS ဒေတာကိုဆိုလိုသည် (ဆိုလို = 29.2, SD = 7.7) Prause ရဲ့လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူ SCS ရမှတ် (ထက်ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလို = 22.31, SD က = 6.05) ။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်မ Prause ရဲ့နမူနာကျနော်တို့ပုံမှန်ကုသမှုမြင်သူမလည်းသူမနမူနာအခြားနည်းလမ်း '' လိင်စွဲ '' ရှာကြံကုသမှုအနေဖြင့်ကွဲပြားကြစေခြင်းငှါ concedes ဘယ်မှာသူမ၏စာရွက်၌ဤဝန်ခံဖို့ပေါ်လာပါဘူးလူနာ Parallel ပါဘူးသောပြဿနာမြှင့်မယ်။ ဒေါက်တာ Prause မှတရားမျှတမှုအတွက်, hypersexual ရောဂါများအတွက်အဆိုပြု DSM-5 စံသူမ၏ဒေတာစုဆောင်းမှု၏အချိန်ကသူမ၏မှမရရှိနိုင်ကြဘူး။
တချို့ကစာရင်းဇယားစမ်းသပ်မှုနားလညျမှုလှဲမှားဖို့ထင်ရှားကျော်ကြားသော, တဖနျ, ထိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာစမ်းသပ်မှု Regression မဟုတ်ဘဲဆက်စပ်မှုရှိကြ၏။ ဆက်စပ်မှုဟာ Regression နှင့်အတူလွဲချော်ခဲ့ကြအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်သမျှဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်ဆောင်းပါးထဲမှာ "ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး" အမည်ရခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်မှုကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများအတွက်အမှားယူဆဒါကြောင့်ဖြည့်စွတ်, ဒါပေမယ့်မတူညီတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တချို့အကြောင်းပြချက်အဘို့, ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်အဓိကတွေ့ရှိချက်မစ္စတာ Wilson ကသို့မဟုတ်အခြားသူများအားဖြင့်ဝေဖန်မှုမဆိုမှာဖော်ပြထားတဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစက္ကူတသမတ်တည်းသောဤအဖြစ် "ဆက်ဆံရေး" သင့်လျော်စွာထိုဝေဖန်မှုအထူးသဖြင့်အကူအညီမဖြစ်ကြပြီးမစ္စတာ Wilson က, ဤကိန်းဂဏန်းစမ်းသပ်မှု misunderstands အကြံပြုဖေါ်ပြထားပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအင်တာနက်ဝေဖန်မှုအချို့သိပ္ပံဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအတုပါပြီ။ အကောင်းဆုံးကတော့, သီအိုရီပေးအပ်သည်, falsifiable ဟောကိန်းများကြောင်းသီအိုရီကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းမြင့်မားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါစွဲမော်ဒယ်တစ်ဦးတိုးမြှင့် P3 နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒါဟာသူတို့အ Construction ၏ရလဒ်များကိုကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုထိုကြောင့်, အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကြောင့်, ဟုတ်ကဲ့, မြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အစွဲမော်ဒယ်များသူတို့ရဲ့သီးခြားသက်ရောက်မှုတစ်ခုစာမေးပွဲခွင့်ပြုထားတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောဟောကိန်းများ, ပါစေ။
တချို့ကဒီလေ့လာမှုအတွက်စုဆောင်းသင်တန်းသားများကိုဝေဖန်ကြသည်။ သူတို့ကပုံလေ့လာမှုမှာဖော်ပြထားသကဲ့သို့, စုဆောင်းအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ကြပြီ hypersexuality ၏အစီအမံ (နှင့်ထိုကဲ့သို့သောငါသည်ထိုလယ်၌ငါ့ကိုယ်ပိုင်အစောပိုင်းသုတေသနအတွက်ကိုလည်းအသုံးပြုကြသည်သောလိင် compulsive စကေးအဖြစ်တူရိယာ) အပေါ်ရမှတ်ကိုဖြတ်ပြီး stratified ခဲ့ကြသည်။ ဤသည် stratification ခိုင်လုံသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်လိုအပ်သောရမှတ်၏သင့်လျော်သောဖြန့်ဖြူးဘို့ခွင့်ပြုနှင့်သုတေသနအတွက်ဘုံအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုဆန့်ကျင်ဘက်လိင်မှဆွဲဆောင်မှုအစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။ ငါဒေါက်တာ Prause ပေးအပ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုလေ့လာမှုမှာအားလုံးပါဝင်သူများအဘို့သက်ဆိုင်ရာအဖြစ်စောဒကတက်နိုင်တည်ထောင်ရန်ဒီခဲ့ယူဆတာပါ။
ဒီဟာပေါ်မှာဒေါက်တာ Prause နှင့်အတူငြင်းခုံလိမ့်မယ်တစ်ခုမှာအမှတ်ရသောအသုံးပြုတဲ့စံချိန်စံညွှန်းမီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုလုံလောက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရူးနှမ်းနှင့်အရှင်အလှည့်၌, P3 ဒေတာအတွက်ကှဲလှဲသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖို့ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, လိင်စိတ်နိုးထလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းခံခဲ့ရပေမယ့်, ငါတို့ပိုကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေးတစ်ခုသို့ဆက်စပ်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပိုမိုပြင်းထန်သော, သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုအစားအသုံးပြုခဲ့ကြသည်လျှင်ကွဲပြားကြလိမ့်မယ်ဘယ်လို သိ. မရှိလမ်းရှိသည်သောယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤပြဿနာကိုလိင်သုတေသီများအကြားအရှည်မှာဆွေးနွေးအမှန်တကယ်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး preferenced လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသုံးပြီးပွားလေ့လာမှုရလဒ်အတူတူပင်ကျန်ရစ်လျှင်ကြည့်ဖို့ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ Prause ဖွယ်ရှိလှုံ့ဆော်မှု neuroscience လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြခြင်းနှင့်အလွန်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားခဲ့ဖျောပွခွငျးအားဖွငျ့ကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။ သူမသည် erotica ကိုက်ညီခြင်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးစားပေး၏လိုအပ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ချက်ကဤထက်ပို arousal ပါလိမ့်မယ်သောယူဆချက်အပေါ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေဟန်ကြောင်းပြည်နယ်ဖွယ်ရှိလည်းချင်ပါတယ်။ သူမသည်နောက်ထပ်သောလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ကိုယ်စားပြုခဲ့ရာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်ငြင်းခုန်ချင်ပါတယ်: နိမ့်နှင့်အမြင့်မားသောပြင်းထန်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ Visual လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု ratings, လူသိများသွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်ပြီးသားတခြားနေရာထုတ်ဝေခဲ့ကြခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာသူမတစ်ဦး hypersexual လူဦးရေရဲ့တိကျတဲ့ preference ကိုလှုံ့ဆော်မှုအချို့အတွက်အသိပေးချက်ရှိစေခြင်းငှါထိုသို့ဤခြားနားချက်ကိုလုပ်လိုလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်အနာဂတ်သုတေသနဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေလျော့မပေးနိုငျသညျ, ကပြောသည်ခံရ။ သူမသည်သူမ၏စက္ကူနှင့်မီဒီယာနှင့်အတူအင်တာဗျူးအတွက်သူမလေ့လာချက်ပုံတူကူးယူရနျလိုအမကဤသို့ဆိုကတည်းကဒီအသိအမှတ်ပြုရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ Prause သူမ၏လေ့လာမှုမှာသတင်းပို့မပြုခဲ့ကြောင်းတစ်ခုမှာအရေးကြီးသောပြဿနာဒီလိုလူနာသည်အခြား comorbid psychopathology (ဥပမာ ADHD), ဦးခေါင်းစိတ်ဒဏ်ရာ, ဆေးဝါးများ, etc ၏သမိုင်းအဘို့အအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်ရှိမရှိခဲ့ ... ကြောင်း P3 ရမှတ်များထိခိုက်ကြပေလိမ့်မည်။ ငါသည်ဤသူမ၏တွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သောန့်အသတ်ဖြစ်ပါသည်ကြည့်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဘို့အပြမပိုကျွန်ုပ်တို့မုချထိုအများ၏အခြေခံပေါ်မှာအကူအညီနဲ့မငြင်းမပယ်သောသူသည်အမှန်တကယ်လူနာကဲ့သို့ကြည့်ရှုအံ့သောငှါအုပ်စုတစ်ခုစမ်းသပ်၏အားသာချက်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် P300 ထိခိုက်ဖြစ်နိုင်သော၏အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, P300 စိတ်ကျရောဂါအတွက်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုမှထိခိုက်နေသည်, ကြှနျုပျတို့သူမ၏သင်တန်းသားများအဘို့အစိတ်ကျရောဂါ diagnoses မရှိကြပါဘူး။ အနည်းငယ်ဝေဖန်မှုရဲ့ Prause ရဲ့ပါဝင်သူအချို့ကိုအကြံပြုခြင်း "မပြဿနာများ" ဖွယ်ရှိတိဖြစ်ကြသည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ရမှတ်တန်ဖိုးများ (ထိုစာတမ်းတွင်စားပွဲတင်2ကိုကြည့်ပါ) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြဿနာများ၏အဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲထိုကဲ့သို့သော Gaussian ဖြန့်ဝေအဖြစ်ယူဆစေရာ Regression, ပို့ချဘို့လိုအပ်ပေသည်။ သူမလည်းဖမ်းဆီးဖို့သုံးဆောင်ရွက်မှုများကို အသုံးပြု. သူမ၏အခြေခံကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့ "hypersexuality ။ " ဒါဟာအားလုံးသုံးခြင်းမရှိ utility ကိုတိုတောင်းဆိုဖို့ခက်ခဲသည်။ ကြောင်း SCS ရမှတ်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနောက်တဖန်ငါငြင်းမယ်လို့မယ့်လူနာလူဦးရေထင်ဟပ်ပျက်ကြ။
ငါလူအခြို့ Prause အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုရှိခဲ့ဖော်ပြထားခြင်းသတိပြုမိပါတယ်။ သေချာမဒီခိုင်လုံသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်တစ်ဦး "အတွင်း-ဘာသာရပ်" ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုမယ့်အတွင်း-ဘာသာရပ်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပေါ်ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်း-ကျောင်းမှာသိပ္ပံ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုပြီးလူတွေဟာတစ်ဦးကိုသီးခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ဦးဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်လိုအပ်သောယုံကြည်စေခြင်းငှါနေစဉ်, အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပိုမိုအားကောင်းစာရင်းအင်းချဉ်းကပ်။ ထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုများကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ရှိမရှိအဖြစ် longitudinal လေ့လာမှုပိုမိုသင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က "ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့" နဲ့ကိစ္စများများအတွက်သူမ၏အပြစ်တင်သို့မဟုတ်ဤချဉ်းကပ်မှုသူမ၏သုတေသနမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရန်မလုံလောက်ခဲ့ကြောင်းငြင်းခုန်လို့မရပါဘူး။ သို့သော်သူတို့ကသုံးကြောင်းအတွင်း-ဘာသာရပ်ထိန်းချုပ်မှုများအကြား-ဘာသာရပ်ဒီဇိုင်းများသည်အခြားမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်စေရန်မလုံလောက်ကြောင်းစောဒကတက်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ cue-reactivity ကိုသုတေသနပြု protocol များ၏ဝေဖန်မှုများတရားဝင်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိကြပေ။ ငါသူတို့ဖွယ်ရှိတိကျစွာနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်သံသယရှိကြသည်။ Prause သူမ၏သုတေသနနှင့်အတူဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်အလွန်အထူးသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, စားခြင်း, လောင်းကစားဝိုင်းလေ့လာမှုများမှာတော့လူတွေကသူတို့နှင့်အတူရုန်းကန်နေနှင့်သူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ပေးနိုင်မဟုတ်နေသောအရာဝတ္ထု၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူတင်ပြကြသည်။ အလားတူပင်သူမ၏လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်ပုံရိပ်တွေ masturbate သို့မဟုတ်တိုးဖို့မညွှန်ကြားခဲ့သည်။ cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများ, သူမ၏လေ့လာမှုအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆင်တူကြောင်းအများအပြားအတွင်း-ဘာသာရပ်သုံးပြီးဒီဇိုင်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ဝေဖန်မှုရဲ့, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်သုတေသနခြင်းမရှိဘဲ, ဒီကယ့်ကိုသိသိသာသာခြားနားအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲပါတယ်။
တစ်ခုမှာအွန်လိုင်းဝေဖန်မှုပေးအပ်သည့် P3 တွေ့ရှိချက်ကွဲလွဲနေကြသည်ကြောင်းအကြံပြု? သေချာမအဘယ်ကြောင့်ဒီအကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအားလုံးစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများအရက်တွေကိုရန်နှင့်တာဝန်အပေါ်မှားယွင်းမှုများမှအရက်သမားတို့တွင်အ P3 လေ့လာခဲ့ကြပါပြီ။ ဤရွေ့ကားလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လုံးဝဝေဖန်မှုအတွက်အတုနေကြသည်။ ဒါဟာ "EEG" ဘာမှ၏အတိုင်းအတာတောင်းဆိုညီမျှရဲ့ EEG နှင့် neuroscience ၏အခြေခံအသိပညာတစ်ခုမရှိခြင်းအကြံပြုထားသည်။ Prause သူမ၏ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။ ပထမဦးစွာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအထွေထွေ P3 ၏ပွားပြသနေသည်။ ဤသည်အဆထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပြသခဲ့ပြီးပုံတူကူးယူအဖြစ်မျှသာမှတ်ချက်ချသည်။ "ဒီပုံတူကူးယူမျှော်လင့်ထားသည့်ယခင်တွေ့ရှိချက်များ, လာမယ့်စီစဉ်ထားစမ်းသပ်ကောက်ယူခဲ့ကွောငျးအား။ " ထို့နော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်ဆံရေးအခြားသူများမတိုင်မီလေ့လာခဲ့ခဲ့ပြီးသောလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာအတိုင်းအတာနှင့်အတူဆက်ဆံရေးလေ့လာနေကြသည်။ သူမကသူမ၏အင်တာဗျူးတွင်ဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်သကဲ့သို့, P3 အတိုင်းအတာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏အစီအမံအကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုသည်အခြားလှုံ့ဆော်မှုကျော်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မှုမှ P3 ချိတ်ဆက်ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ရလဒ်ပြသထားတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် P3 နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအစီအမံများအကြားဆက်ဆံရေးအလားအလာသူမ၏များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းချက်ပူဇော်နိုင်သည့်သူမ၏လေ့လာမှုမှာတိုင်းတာမရနဲ့အခြား variable တွေကိုတဆင့်သွယ်ဝိုက်ရှိမရှိမသိရပါဘူး တွေ့ရှိချက်များ။
ငါပေါ်ထွန်းစေခြင်းငှါ, တဦးတည်းကိစ္စနည်းပညာအဖြစ် EEG မစ္စတာ Wilson ကရဲ့ထုတ်ပယ်နဲ့ငါ့အဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်။ EEG နေဆဲကမ္ဘာကြီးအနှံ့မြောက်မြားစွာဓါတ်ခွဲခန်းများတွင်အသုံးပြုလျက်, fMRI နှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်းအချို့ကိစ္စများတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအခြားသူတွေ (Polich, 2007) ကမှတ်ချက်ချအဖြစ် EEG က၎င်း၏န့်အသတ်မရှိပါဘူးမရဲ့, ဒါပေမဲ့သူတို့ Prause ရဲ့လေ့လာမှုများ၏အခြေအနေတွင်မစ္စတာ Wilson ကအားဖြင့်ဖော်ပြထားသောသူတွေကိုမရှိကြပေ။ တစ်ဦးကတရားမျှတဝေဖန်မှုများ EEG fMRI နှေးကွေးကွဲပြားမှုဖြစ်ပေါ်ဘယ်မှာရှာတွေ့ဘို့စံပြသည်အဘယ်မှာရှိဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်အစောပိုင်းမြန်ဆန်ကွဲပြားခြားနားမှုရှာဖွေစံပြကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ EEG မဟုတ်သလို fMRI ကိုမမူလကပင်တစ်ဦး "အကောင်းဆုံး" အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤဝေဖန်မှုရဲ့အစမှာမှတ်ချက်ချအဖြစ်တနည်းကား, သို့သော်, ကမဆိုကြင်နာ၏ဦးနှောက်အမှတ်အသားများသို့မဟုတ်သင့်တဲ့ရောဂါ၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်းအဘို့သက်သေအထောက်အထားကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာဒွန်ဟီလ်တန်, တစ်ခါးပန်း ListSrv ပို့စ်အတွက် P3 ၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းထုတ်ဒါပေမယ့်ငါကသူ့အားကောင်းအငြင်းအခုံထိုကဲ့သို့သော "အလိုဆန္ဒ" နဲ့ "တဏှာ" အဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေး operationalized နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးဟာငုပ်လျှိုးနေ variable ကိုအဘို့အကောင်းတစ်ဦးကို proxy ရှိမရှိဘယ်လိုတည်ရှိသည်ထင် အကျိုးစီးပွား။
Prause ရဲ့လေ့လာမှုစွဲနေတဲ့သီအိုရီကိုတစ်ဦးတည်းမြင့်မားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကျော် hypersexual အပြုအမူခန့်မှန်းအတွက်ရှင်းလင်းပါဝါရှိပါတယ်ရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဒါဟာလိင် dysregulated အပြုအမူများ၏ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစွဲမော်ဒယ်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းပြချက်ကမ်းလှမ်းသာဖြစ်စေ, တရားဝင်ဟုတ်မဟုတ်ဖြေရှင်းမပေးပါဘူး။
သူမ dysregulated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သမျှစည်းလုံးသီအိုရီနှင့်ဆက်စပ်သောမေးခွန်းများကိုကိုင်တွယ်ရန်စတင်မယ့်အဖြစ် Prause insofar စာပေမှတစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအလှူငွေစေသည်။ အဆိုပါလိင်စွဲလမ်းလယ်၌ပင် hypersexual အပြုအမူအပေါ်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကြီးအကျယ် dysregulated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုသီအိုရီမော်ဒယ်အထောက်အကူပြုရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ Prause ရဲ့လေ့လာမှု၏ကန့်သတ်မှုအချို့မှာအမှန်တကယ်ကတစ်ခုစွဲမော်ဒယ်သို့မဟုတ်အချို့သောအခြားမော်ဒယ်ဖြစ်စေ dysregulated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခု testable သီအိုရီသတ်မှတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်န့်အသတ်တစ်ခုတိုက်ရိုက်ရလဒ်ဖြစ်ကြသည်။ သူမတစ်ဦးပုံစံများ၏သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်ရှိပါတယ်သို့မဟုတ်သူမရိုးရိုးလေးသည်အခြားမော်ဒယ်များတိမ်ပေါ်သူမ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအာရုံစိုက်ဆက်လက်င့်ခြင်းရှိမရှိလျှင်စိတ်ဝင်စားစရာအဘယ်သူမျှမကဒေါက်တာ Prause ဟုမေးခဲ့သည်။
သူမ၏လေ့လာမှုအလိုဆန္ဒနှင့်အ hypersexuality သူမ၏အစီအမံသူမလေ့လာနေသောငုပ်လျှိုးနေ variable ကိုဖမ်းယူသည်ယူဆတယ်။ ဤအမှုသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပါအဝင်များစွာသောလေ့လာမှုတွေအတွက်မွေးရာပါတစ်ယူဆချက်ဖြစ်သော်လည်းငါတို့သည်သို့ရာတွင်ထိုသို့ထားတဲ့ယူဆချက်ကိုယျ့ကိုယျကိုသတိပေးရပေမည်။
EEG ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ပျက်ဘယ်မှာအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်ကမ်းလှမ်းသည်အခြားပုံရိပ်နည်းစနစ်သော်လည်း, ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အစာရှောင်ခြင်း, အစောပိုင်းကွဲပြားခြားနားမှုရှာဖွေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကတခြားပုံရိပ်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုစွဲသီအိုရီအတွက်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံအားကောင်းပေလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်, ပွားလေ့လာမှုများ "ပြင်ပတရားဝင်မှုအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောသင်တန်းသားများကိုနှင့် protocol များနှင့်အတူထိုအရလဒ်များကိုရမ်းပွားပိုပြီးအာရုံစိုက်, အစဉ်အဆက်သည်။ " သူမ၏လေ့လာမှုကနေအဖြစ် Prause ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုထပ်မံပံ့ပိုးမှုပေးရန်လိုအပ်သောများမှာ
လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုထဲတွင်ပါဝင်သူများ၏နမူနာအကြောင်းကိုမေးခွန်းလွှာအချို့ကုသိုလ်ယူရှိသည်။ Prause လူနာစုဆောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူမ၏ဒေသခံ IRB အားဖြင့်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားကနေတားဆီးခံခဲ့ရသည်။ မဆိုအနာဂတ်ပွားလေ့လာမှုများ hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်နည်းလမ်းများနှုန်းအဖြစ် hypersexual လူနာခွဲခြားရန်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုလည်း hypersexual လူဦးရေရဲ့ပေးထားသောလေ့လာမှုနဲ့တိကျတဲ့ preference ကိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ ကတုန်းပဲထိန်းချုပ်ဖို့ပိုအရေးကြီးလှသည်ဖြစ်သောသိရန်ခက်ခဲသည်နှင့် Trade-off ပြင်ပတရားဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာ comorbidity, psychopathology, ဦးခေါင်းစိတ်ဒဏ်ရာများ၏သမိုင်းနှင့်ဆေးဝါးသက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
မီဒီယာ Prause ရဲ့တွေ့ရှိချက်အချို့ကိုလွဲမှားခဲ့သည်။ သူမကထိုကဲ့သို့အစီရင်ခံစာများများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်အချို့သောတာဝန်ရှိရှိပါတယ်နေစဉ်, ကျွန်တော်တို့အများကြီးမီဒီယာ misquoting ဆက်စပ်သို့မဟုတ်မှားယှငျးစှာကျနော်တို့ကဆိုပါတယ်င့်ခြင်းနှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤလေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအစီရင်ခံစာများကိုဖတ်ရှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဤယူသင့်တယ်သောအရာတို့ကိုအစီရင်ခံနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: အပေါ်မစ္စတာ Wilson ကရဲ့စာမျက်နှာ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ကမှားမသင့်လျော်, ဒါမှမဟုတ်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါကသူတို့ရဲ့ website သို့စာမျက်နှာများမှသတင်းအချက်အလက်ကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။ အမှားသိသိသာသာငွေပမာဏမှာတစ်စုံတစ်ဦးကဒါဖြစ်ကောင်းမစ္စတာ Wilson ကယ့်အလုပ်အတွက်ဆက်ဆက်ရှိခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ကဖယ်ရှားပစ်ရန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်။
Kor, အေ, Fogel, YA, Reid, RC, & Potenza, MN (2013) ။ hypersexual Disorder ကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သလား။ လိင်အကျင့်စွဲခြင်း၊(1-2), 27-47 ။
Polich, ဂျေ (2007) ။ P300 အသစ်ပြောင်းခြင်း: P3a နှင့် P3b ၏အရေးပါသောသီအိုရီ။ လက်တွေ့ Neurophysiology ။ 118(10), 2128-2148 ။
ရိဒ်, RC, Garos, အက်စ်, & လက်သမား, BN (2011) ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ကိုအမျိုးသားများ၏အပြင်လူနာနမူနာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု &
compulsivity, 18 (1), 30-51 ။ Reid, RC, Carpenter, BN, Hook, JN, Garos, S. , Manning, JC, Gilliland, R. , Cooper, EB, McKittrick, H. , Davtian, M. , & Fong, T. ၏အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၂) များအတွက် DSM-2012 ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုအတွက်တွေ့ရှိချက်
Hypersexual Disorder ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 9(11), 2868-2877 ။ ဆောင်းရာသီ, ဂျေ, Christoff, K. , & Gorzalka, BB (2010) ။ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းမရှိသောလိင်မှုနှင့်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒများ - ကွဲပြားသောတည်ဆောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 39 (5), 1029-1043 ။